दन्द्धकालका मुद्धा ब्यूताउन एमाले निकट वकिलहरु सक्रिय
४ माघ २०७२
४, माघ जाजरकोट । दन्द्धकालका मुद्धाहरु ब्यूताउन एमाले निकट वकिलहरु लागिपरेको एकीकृत माओवादी नेता जर्नादन शर्माले आरोप लगाएका छन् । क्रातिकारी पत्रकार संघ जाजरकोटले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता शर्माले सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सम्वोधन हुने मुद्धाहरु व्यूत्याएर एमाले निकट वकिलहरुले राम्रो नगरेको बताए । दन्द्धकालका घटनाहरु ब्यूताउने नियतबारे सरकारसँग गम्भिर छलफल हुने नेता शर्माले बताए । नेता शर्माले वर्तमान सकारका मन्त्रीहरुले…विस्तृत समाचार »
राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो यस्तो विवरण
४ माघ काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको विवरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर गत वर्षको माघ १ गतेदेखि यो वर्षको पुस मसान्तसम्म गरेका कामको विवरण प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको हो । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईओटा पुस्तिकामार्फत् कामको विवरण बुझाउनेक्रममा एक वर्षको अवधि निकै उत्पादनशील रहेको दाबी गरेका छन् । प्रमुख…विस्तृत समाचार »
अर्कैकालागि संविधान संशोधनः उपप्रधानमन्त्री के.सी
काठमाडौ, ४ माघ नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन नेपालीका लागि नभई अर्कैका कारण संसदमा दर्ता भएको बताएका छन् । नेपाल–क्यानडा मैत्री तथा साँस्कृतिक संघको आयोजनामा ‘पर्यटन र पर्वतारोहणः नेपाल–क्यानडा’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘यसपाली कसैलाई नसोधी संविधान जारी गर्ने र सरकार प्रमुख बनाउनाले नेपाल र नेपालीले सास्ती खेप्न परेको छ ।’ ‘यसैगरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि नेपाल र नेपाली…विस्तृत समाचार »
एमाले संसदीय दलको विधान परिमार्जन हुने
४ माघ काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद्मा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थप गृहकार्यसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सबै दलसँग आवश्यक परामर्शपछि थप गृहकार्य गरेर मात्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले एमाले संसदीय दलको विधानसमेत परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । विधान परिमार्जनका लागि प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल संयोजक…विस्तृत समाचार »
माओवादी मन्त्रीविरुद्ध उजुरी गर्न पेरिसडाँडामा पत्रमञ्जुषा
४ माघ, काठमाडौं । सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि एमाओवादीले सर्वसाधारणबाट सुझाव माग्न थालेको छ । सँगै मन्त्रीका गलत कामविरुद्ध उजुरी दिनसमेत छुट्टै पेटिका राखिएको छ । एमाओवादीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा राखेको पेटिकामा सरकार सञ्चालन सहयोग तथा समन्वय समिति मन्त्रीहरुले गर्नुपर्ने नयाँ कामको योजनाबारे सुझाव दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको नयाँ पत्रिकामा न्युज छ । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी आठ मन्त्रीले केही गलत…विस्तृत समाचार »
कांग्रेस महाधिवेशन ,उद्घाटनमै ५० लाख !
४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन निकै महँगो बन्ने अवस्था देखिएको छ । महाधिवेशनमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको हो । कांग्रेसका अनुसार १२ औं महाधिवेशनमा भएको दुई करोड ७५ लाखको बजेटले यसपटक नधान्ने देखिएको छ । १३ औं महाधिवेशनमा झन्डै सवा करोड रुपैयाँ खर्च बढी हुने अनुमान आर्थिक समितिले गरेको छ । आर्थिक समितिका सदस्यहरुले १३ औ महाधिवेशनका…विस्तृत समाचार »
दलहरूबीच सहमति गर्न मस्यौदा तयार
४,माघ,काठमाण्डौं । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा सीमांकनको विवाद टुंगो लगाउनेबारे सहमतिनजिक पुगेका छन्, विवाद कायम नै रहेको राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे पनि उनीहरूबीच आइतबार अनौपचारिक सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सरकार, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको वार्तामा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत दलका नेताहरु । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलले प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन…विस्तृत समाचार »
अंगिकृत नागरिकताधारिलाई नेपालको सर्वाैच्च पद स्वीकार्य हुँदैन : कोइराला
३ माघ २०७२
३, माघ दाङ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले अंगिकृत नागरिकताधारिलाई नेपालको सर्वाैच्च पद कदापी स्वीकार्य नहुने वताएका छन् । दाङको तुलसीपुर आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोईरालाले सबै देशको आफ्नै नियम हुने हुँदा अंगिकृत नागरिकताधारीलाई मुलुकको संवैधानिक पदहरु दिन नसकीने वताएका हुन । तर उनले काठमाडौंले मधेसी मोर्चालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको वताए । उनले भने ‘ मधेसी मोर्चाका मागहरु सम्वोधन…विस्तृत समाचार »
एकसय ५५ दिनमा मधेस आन्दोलन, आज बीरगन्जमा मजदुरको प्रर्दशन
३, माघ बीरगन्ज । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा भईरहेको आन्दोलनलाइ समर्थन गर्दै मजदुरहरुले आज बीरगन्जमा जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सर्मथीत मधेशी ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालको आहवानमा गरिएको प्रदर्शनमा बीरगन्ज पथलैया कोरीडोरका मजदुर र मोर्चाका नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो । वीरगन्जको पावर हाउसबाट निस्किएको जुलुस बीरगन्ज परिक्रमा गर्दै नाका स्थित मितेरी पुलमा पुगि सभामा परिणत भएको थियो । नाकामा आयोजित सभालाइ…विस्तृत समाचार »
मृगौला रोगका कारण दाहालको निधन
३ माघ काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता वीरेन्द्र दाहालको उपचारका क्रममा शनिबार राति ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पार्टीमा सधैँ पद बाहिर रहेर निरन्तर सक्रिय रहेका नेता दाहालको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा मृगौला रोगको उपचारका क्रममा निधन भएको परिवारजनले जानकारी दिएको छ । काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालगायत काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले शिक्षण अस्पताल पुगी स्वर्गीय नेता दाहालको पार्थिव शरिरमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए। विसं। २००५…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 717 718 719 720 721 Older Last ›